वि.सं. २०७५ वैशाख ०६ गते बिहिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल १९ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > वि.सं. २०७५ वैशाख ०६ गते बिहिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल १९ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस
भोलि तपाई कडा परिस्थितिबाट गुज्रनु पर्ला। भोलि को दिन विध्यार्थीहरुको लागि गार्हो रहने देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई अध्ययन सफलता पाउनको लागि साविक भन्दा धेरै मिहेनत गर्नु पर्न सक्ला। भोलि तपाईलाई पाचन सम्बन्धी समस्याले सताउने देखिन्छ। भोलि घर भन्दा बाहिर केहि नखानु होला।
भोलि दिनमा तपाईलाई हर-हिसाबमा लाभ मिलेर जाने देखिन्छ। भोलि बोलिमा प्रभाब बढेर जाँदा तपाईको समाजमा मान-प्रतिष्ठा बढ्ने योग रहेको छ। भोलि परिवारमा खुशीको माहोल हुनेछ भने प्रेमी प्रेमिका बीच सम्बन्ध पनि राम्रो भएर जानेछ। भोलि तपाई शारीरिक तथा मानसिक रूपले उत्साहित रहनु हुने देखिन्छ।
भोलि तपाईमा शारीरिक स्फूर्तिको कमि रहने देखिन्छ। भोलि परिवारमा शान्त वातावरण होस् भन्नको लागि तपाई आफैं संयम रहनु होला। मानसिक विकारहरू बढ्न सक्ने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई कानुनी रुपमा पनि जटिलताको सामना हुन सक्ला। भोलि तपाईले चिताउनु भएको कार्य सम्पन्न हुन गार्हो पर्ने देखिन्छ।
भोलि तपाईको सम्पूर्ण अधुरा कार्यहरु सम्पन्न भएर जानेछन। भोलि तपाईको दैनिकीमा परिवार्ताना आउने देखिन्छ। भोलि तपाइको मनोरंजनमा दिन व्यतित होला। भोलि साथीहरुसंग जमघटमा जुट्ने योग रहेको छ। साथै पढाईमा पनि उन्नति हुने देखिन्छ। भोलि नंया कार्य थालनीको लागि पनि उत्तम दिन रहेको छ।
भोलि को दिनमा तपाईको आय बढेर जाने देखिन्छ भने भोलि तपाईको व्यवसायमा समेत वृद्धि हुन सक्ला। भोलि तपाईको सम्पूर्ण समस्या हल भएर जाने देखिन्छ भने भोलि तपाईको मन प्रफुल्लित रहन सक्ला। तर पनि भोलि मध्यान्न पछी भने अधिक संवेदनशीलता र भावनात्मकता अनुभव गर्नु हुने देखिन्छ।
भोलि को दिन तपाईको आर्थिक योजना लागू गर्नको लागि शुभ देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई साझेदारीबाट समेत लाभ मिल्ने देखिन्छ। शारीरिक र मानसिक ऊर्जा बढ्ने देखिन्छ भने भोलि तपाईमा कान्ति समेत बढ्न सक्ला। भोलि तपाईलाई अध्ययनमा लाभ मिल्ने देखिन्छ। साथी र नातेदारहरूबाट उपहार मिल्ने देखिन्छ। भोलि यात्रा सफल रहला।
भोलि खान पानमा बिशेष ध्यान पुराउनु होला भने स्वास्थ्य पनि खासै राम्रो नहुने देखिन्छ। शरीरमा उर्जाको कमि हुदा काम गर्ने जाँगर हराएर जानेछ। मनमा उदासीनता छाउने छ। भोलि धार्मिक कार्यमा मन जानेछ भने भोलि धर्मिक कार्यका कारण दिन राम्रै जानेछ। भोलि सानो सानो कुरा क कारण चिन्ता बढ्ने देखिन्छ।
भोलि को दिन तपाईको नयाँ तरिकाबाट व्यतित रहने देखिन्छ भने भोलि तपईकै अआर्थिक लाभ समेत राम्रै मिल्न सक्ला। भोलि तपाईलाई परिश्रम परे पनि कम प्रतिफल मिल्नाले मानसिक चिन्ता बढेर जाने देखिन्छ। भोलि तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार आउने देखिन्छ भने भोलि खेलकुद प्रति लगाभ बढेर जाने दिन रहेको छ।
भोलि तपाई मित्र र साथीहरूसँग यात्रामा निक्लनु हुने देखिन्छ भने भोलि तपाईको मनोरन्जनको मामलामा खर्च पनि बढेर जाने देखिन्छ। भोलि तपाईको निर्धारित कार्य समयमा सफल रहन सक्ला। भोलि तपाईको मन प्रफुल्लित रहन सक्ला। तर पनि भोलि मध्यान्न पछी भने अधिक संवेदनशीलता र भावनात्मकता अनुभव गर्नु हुने देखिन्छ।
भोलि भावनाको प्रवाहमा बग्नाले तपाईको कार्य विफल हुने देखिन्छ। भोलि तपाईमा एकाग्रताको कमि रहने देखिन्छ भने भोलि तपाईले कर्जा नलिनु भएकै उचित रहने देखिन्छ। भोलि अचल सम्पत्तिको जोहो गर्नको लागि पनि शुभ देखिन्न। भोलि तपाई कुनै पनि प्रकारको बहसमा अघि नसर्नु होला। भोलि को दिन तपाईको निर्णय गर्दा संयम रहनु पर्ने देखिन्छ।
भोलि को दिनमा तपाईलाई प्रेममा सफलता मिल्न सक्ला। हरेक कार्य बहुत सरलतापुर्वक सम्पन्न हुनाले तपाईमा मानसिक कान्ति बढ्न सक्ला। भोलि तपाई रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त गर्न सफल रहनु हुने देखिन्छ। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहन सक्ला। भोलि तपाईलाई श्रमको उचित मूल्यांकन मिल्न सक्ला।
भोलि बोलिमा प्रभाब बढेर जाँदा तपाईको समाजमा मान-प्रतिष्ठा बढ्ने योग रहेको छ। भोलि तपाईलाई विविध क्षेत्रहरु सफलता मिल्ने देखिन्छ भने भोलि तपाईको छुट्टै पहिचान रहने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई आर्थिक, सामाजिक साथै धार्मिक क्षत्रमा यश, कीर्ति तथा लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ। भोलि तपाइलाई रचनात्मक कार्यमा समेत लाभ मिल्ने देखिन्छ।
माटोको ढिस्कोमा पुरिएर तीन महिलाको मृत्यु
दाङ बस दुर्घटनाः ‘बाबा म साँझ आउँछु’ भन्दै बाईबाईको हात हल्लाएका थिए यी कलिला मुनाहरु